Manchester United oo u gacan haatineysa Jordan Pickford – Bandhiga
Manchester United oo u gacan haatineysa Jordan Pickford
Wargeyska “The Sun” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Manchester United ay durbadiiba sii go’aamisay cida ay badalka kaga dhigan doonto goolhaayaheeda koowaad ee David de Gea, hadii ay dhacdo inuu ka dhaqaaqo garoonka Old Trafford.
Manchester United ayaa bar-tilmaameed koowaad ka dhiganeysa goolhaayaha kooxda Everton iyo xulka qaranka England ee Jordan Pickford, si ay kaga dhigato badalka David de Gea.
Jordan Pickford ayaa lagu xasuustaa bandhigii fiicnaa uu ka sameeyay koobkii aduunka 2018 ee ka dhacay dalka Russia, wuxuuna door weyn ku lahaa in xulka qaranka England uu hogaaminayay Gareth Southgate uu yimaado ilaa iyo wareega 4 dhamaadka.
Heshiiska David de Gea uu ku joogo garoonka Old Trafford ayaa wuxuu dhacayaa sanada 2020, balse wada hadalada labada dhinac ayaa ilaa iyo haatan ku guuldareestay inay wada gaaraan heshiis cusub.
Sida laga soo xigtay ilo kale, Red Devils ayaa diyaar u ah inay dalab gaarsiisan 60 milyan ginni ay miiska u saarto Everton, si ay ugu qanciso kooxda Tevez-ka, qorshaha ay ku doonayaan saxiixa goolhaayaha cajiibka ah ee Jordan Pickford.